Akhriso: Nuxurka Heshiiska Doorashada ee Khamiista Lagu Saxiixayo Muqdisho – Goobjoog News
Waxaa Khamiista berri ah lagu wadaa in heshiiska doorashada lagu saxiixo xerada Afisyooni kadib wada hadal socday muddo todobaad ah.
Shirkan oo marka laga reebo ra’isul wasaararaha, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha Banaadir ay sidoo kale kasoo qeyb galayaa madaxweyneyaashii hore sida Sheekh Shariif, Xasan Sheekh iyo Farmaajo ayaa agu wadaa in marka hore war murtiyeed laga akhriyo, kadib khudbado la galo, xubnaha bulshada rayidka ayaa sidoo kale la casuumay.
Siyaasadda: War-murtiyeedka Khamiista soo baxaya waxaa la adkeyn doonaa in doorashada ka dhacdo labo deegaan doorasho oo maamul goboleed kasta ah iyada oo xal laga gaaray Gedo oo markii hore Farmaajo isku dhejiyey.
Waxaa kale oo baarlamaannada heer Dowlad Goboleed ay soo dooran doonaan Xildhibaannada Aqalka Sare e baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Arrinta Somaliland: Guddoomiye Cabdi Xaashi oo odeyga ugu sareeya siyaasiyiinta Somaliland waxaa ay Farmaajo iyo kooxdiisa u diideen in isaga iyo Mahdi Guuleed ay mid labo xubin ku lahaadaan FEIT, waxaa kale oo loo diiday in la kala barto guddiga SEIT. Guud ahaan 15-ka xubin ee laga sugayo Somaliland waxaa la siiyey Xaashi 5 xubin oo keliya taas oo ka dhigan in Mahdi Guuleed oo ah gacanta midig ee Farmaajo uu inta badan maamulayo doorashada Somaliland.